Waa Dhaqanka Real Madrid & Barcelona In Ay Iska Hor Keenaan Ciyaartoyda Caanka Ah Iyo Taageerayaasha Kooxahooda. - Gool24.Net
Eden Hazard ayaa xalay si rasmi ah saxaafada uga hore sheegay in uu ka baxayo Chelsea isla markaana uu tartan cusub raadsanayo, mana aha ciyaartoygii ugu horeeyay ee Premier league ah ee kooxdiisa ka bixi doona isaga oo lumiyay jacaylkii badnaa ee loo hayay.
Siyaasada suuqa ee kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa iskaga mid ah in ciyaartoyda ay doonayaan ay dhex marsadaan fariin ah in uu maamulka kooxdiisa saxaafada uga sheego in uu baxayo haddii lagu adkeeyo wada xaajoodka.
Waxa kale oo ay kooxaha reer Spain ee Barcelona iyo Real Madrid ay iskaga mid yihiin in ay ciyaartoyda ku riixaan in ay gaadhaan heer ay warqada bixitaanka u gudbiyaan kooxaha ay ka tirsan yihiin taas oo colaad dhex dhigta ciyaartoyga baxaya iyo taageerayaashii waqtiga badan soo daba taagnaa.
Wixii uu xalay Eden Hazard sameeyay waxa uu ahaa wax sii qorshaysnaa isla markaana la filan karayay, manuu ahayn wax waran soo boodo ah ku noqday maamulka iyo taageerayaasha kooxda Chelsea.
Real Madrid ayaa wax walba u samaynaysa in ay Eden Hazard kooxdeeda keento xagaagan, waxayna hadda Los Blancos ku guulaysatay qayb badan oo ka mid ah hawlgalka Stamford Bridge.
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid waxay hore ugu guulaysteen ciyaartoydii horyaalka Premier League ugu fiicnaa oo ay ugu danbeeyeen Philipp Coutinho, Luis Suarez, Luka Modric, Gareth Bale iyo ciyaartoy badan oo ka horeeyay.
Inta badan nooca siyaasada laga adeegsado Real Madrid iyo Barcelona marka ay ciyaartoy wayn ka doonayaan Premier League waa mid isku mid ah, waana mid ah in ay marka hore wada xaajood furaan, haddii uu adkaado wada xaajoodku waxay fariin dhex mariyaan ciyaartoyga ay doonayaan.
Haddii aan dib u xusuusanyo dhacdadii ugu danbaysay ee sanadkii hore, Barcelona waxay Philippe Coutinho ku riixday in uu gaadho heer uu warqada bixitaanka ka dalbaday Liverpool isla markaana uu gaadhay heer uu kooxda ka cago jiiday in uu kulamo u ciyaaro.
Waxa kale oo ka horeeyay Mascherano oo xataa diiday in uu soo galo kulan ay Liverpool ciyaaraysay, waxa kale oo ay Real Madrid saxiixyada Luka Modric iyo Gareth Bale ugu guulaysatay in ay maamulka kooxdooda farta ka saareen go’aanka bixitaankooda.
Inkasta oo ay kooxaha Premier League leeyihiin awooda lacageed iyo sumcada horyaal ee ay ciyaartoy waa wayn ku haysan karaan, haddana wali kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa ah kooxo ay ciyaartoyda ugu magaca wayni ku riyoodaan in ay ka ciyaaraan.
Eden Hazard ayaa kaga dhabayn doona riyadiisii carruurnimo ee ahayd in uu Real Madrid ka ciyaaro iyo in uu la shaqeeyo Zidane wuxuuna hadda qaaday talaabooyinkii uu Bernabeu ugu wareegi lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, Florentino Perez iyo Zinedine Zidane ayaa ugu danbayn ku guulaysanaya saxiixa Eden Hazard kaas oo noqonayaa mid ka mid ah ciyaartoydii Premier League ee horyaalka La Liga u dhaqaaqaya.